Momba anay - Zhejiang Jinbang Sports Equipment Co., Ltd.
Customer-centric, kalitao amin'ny fiainana
Jinbang Holdings Co., Ltd. dia voasoratra anarana ary naorina tamin'ny 2017, ary ny teo alohany dia Zhejiang Jinbang Sports Equipment Co., Ltd. Zhejiang Jinbang Sports Equipment Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2004. Taorian'ny fandrosoana 14 taona dia lasa orinasa iray manarona fitaovam-panatanjahan-tena R&D sy famokarana, fitaovana fanaovana pirinty nomerika R&D sy famokarana, fitaovana feno R&D sy fanamboarana automatique, ary fikarohana sy fandrosoana momba ny haitao robot. Jinbang Holdings amin'izao fotoana izao dia manana zanatany efatra an'ny fananana manontolo.
Ny vokatra dia amidy any Etazonia, ny Vondrona eropeana (UK, France, Alemana) ary ny firenena sy ny faritra hafa. Ireo mpiara-miombon'antoka dia marika ambony indrindra amin'ny indostria manerantany.
Ny orinasa dia manaraka ny foto-kevitry ny "laza aloha, ny mpanjifa aloha, ny kalitao ho an'ny fahavelomana, ny fanavaozana ho an'ny fampandrosoana", ary ny fitantanana tsy fivadihana.
"Fianarana mitohy, fanatsarana mitohy, fanatsarana mitohy, fanavaozana mitohy, fanatsarana mitohy" ho toy ny fanahin'ny orinasa.
Hatramin'ny nananganana azy dia nampiditra tsy tapaka ny teknolojia famokarana mandroso sy traikefa fitantanana ao an-trano sy any ivelany ny orinasa. Ny orinasan'ilay orinasa amin'ny ankapobeny dia miompana amin'ny fanondranana, ary ny 80% amin'ny vokatra vokariny dia aondrana. Ny orinasa dia mifikitra hatrany amin'ny fitsipiky ny mifantoka amin'ny mpanjifa sy ny kalitao amin'ny fiainany, manaraka ny filozofia momba ny "fanavaozana, kalitao, fahamendrehana ary fahombiazana"; ary mandray "fianarana mitohy, fanatsarana tsy tapaka, fanatsarana tsy tapaka, fanavaozana mitohy, ary fanatsarana tsy tapaka" ho toy ny fanahin'ny orinasa. Fanoloran-tena hanome vokatra kilasy voalohany sy serivisy tso-po indrindra ho an'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany. Ny orinasa dia manaraka ny foto-kevitry ny "laza aloha, ny mpanjifa aloha, ny kalitao ho an'ny fahavelomana, ny fanavaozana ho an'ny fampandrosoana", ny fitantanana tsy fivadihana ary ny fampandrosoana tsy tapaka ny vokatra vaovao hamaly ny filan'ny tsena.
- Hevitra ara-kolotsaina—
Ny fahasambarana no avo indrindra
Mamorona rafi-kolontsaina orinasa miaraka amin'ny "Kolontsaina ao amin'ny fianakaviana" ho toetra mampiavaka ny Rodera volamena
Jinbang Holdings (Group) Co., Ltd. dia vondron'orinasa mitambatra indrindra amin'ny R&D, famokarana sy fivarotana mpanonta indostrialy, fitaovana mandeha ho azy ary vokatra fanatanjahan-tena (scooter, skateboards vaovao, skate, fiara elektrika, bisikileta fanatanjahan-tena an-trano, sns.), Amidy amin'ny firenena maherin'ny 60 eran'izao tontolo izao ny vokatra, ary ny toby famokarana foibe dia ao amin'ny Zhejiang Lijin Hardware Technology Industrial Park. Ity atrik'asa ity dia manana atrikasa famokarana 150.000 metatra toradroa, mpiasa maherin'ny 1.200, sampana efatra an'ny orinasa efatra, orinasam-bola 5 ary orinasam-pananana 2. Ny sampana dia any Lishui, Hangzhou, Shanghai, Shenzhen, ary Guangzhou, Zhejiang. Ny orinasa dia ahitana an'i Zhejiang Jinbang Sports Equipment Co., Ltd., Zhejiang Puqi Digital Technology Co., Ltd., Shenzhen Jin Gutian Technology Co., Ltd., Zhejiang Meijiani Automation Equipment Co., Ltd., sns.
Isan'ny firenena fanondranana
Subsidiarian'ny tompony manontolo
Tamin'ny 25 Mey 2004
Zhejiang Jinbang Sports Equipment Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny fomba ofisialy;
Tamin'ny 2011, ny sandan'ny vokatra isan-taona an'ny orinasa dia nihoatra ny 100 tapitrisa yuan tao anatin'ny 7 taona, ary nanjary orinasa maoderina mampifangaro ny R&D, ny famokarana ary ny varotra;
Niorina ny Shenzhen Jin Gutian Technology Co., Ltd.
Golden Rod Sports dia nahazo tombam-bidy 161 tapitrisa yuan ary nanampy tany indostrialy 58,4 mu;
Niorina ny Zhejiang Freedom Sports Goods Co., Ltd.
Ny orinasan'ny orinasa vaovao dia vita ary napetraka tamin'ny famokarana, miaraka amin'ny velaran'ny fananganana efa ho 100,000 metatra toradroa amin'ny tranon'ny orinasa maoderina;
nahatratra 300 tapitrisa yuan ny tombam-bidin'ny orinasa; tamin'io taona io ihany dia niorina Zhejiang Puqi Digital Technology Co., Ltd.
Jinbang Holdings Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny fomba ofisialy;
nanampy vondrona indostrialy 100 hektara ny vondrona ary nandefa ny tetikasa Puqi Digital Printing Industrial Park.